The Irrawaddy's Blog: ဗမာ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း
Myanmar နဲ့Burma စကားလုံး အသုံး အငြင်းပွားတဲ့အခါ ကိုးကားချင် ကိုးကားနိုင်ဖို့ဒီပို့ စ်ကို တင်ပါတယ်။
ဘီဘီစီမှာ လွှင့်သွားပြီးသားကို ဒီက ယူပါတယ်။
စာစီစာရိုက် - မျိုးဆက်သစ် စာစီစာရိုက်၊ စာအုပ် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
Posted in: Data , Perspective , အချက်အလက် , အမြင်
မြန်မာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးဟာ အင်မတန်မှ ရှုပ်ထွေးပါတယ် ... ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်လို နိုင်ငံကို Burma လို့ခေါ်ပြီး လူမျိုးကို Burmese လို့သုံးရပါတယ် .. သူများနိုင်တွေလဲ နိုင်ငံကို တမျိူးခေါ်ပြီး လူမျိုးကို ပြောတဲ့အခါ နောက်မှာ nes ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးကြတာဟာ သဘာဝကျပါတယ် Myanmar လို့သုံးလိုက်တော့ လူမျိုးကို သုံးတဲ့ အခါ nes လို့ မထည့်ဘဲ ဘယ်လိုသုံးကြမလဲ နိုင်ငံအသံနဲ့ လူမျိုးအသံဟာ တော်တော်ကွဲပြားမှ နားလည်ကြတာပါ .. ဥပမာ Myanmar ကို myanmarnese လို့ခေါ်တာ မတွေ့ရပါဘူး တစ်ချို့တနေရာမှာတော့ myanmarn လို့ခေါ်ပါတယ် .. နားထောင်ရတဲ့သူ နားမလည်ကြပါဘူး .. ရှင်းပြနေရတာကြာတော့ Aung San Su Kyi country လို့ပြောလိုက်မှ သိသွားကြပါတယ် .. မြန်မာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးဟာ ကဘောက်တိ ကဘောက်ချာ ကျလွန်းပါတယ် .. အင်း ပေါ့လေ ..အုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေကမှ လူကောင်းမှ မဟုတ်တာ ..
ှဗမာနဲ့မြန်မာ အတူတူပါဘဲဗျာ။ နံမည်နှစ်မျိုးစလုံး ကျနော်တို့ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေကို ကိုယ်စားမပြုပါဘူး။ ဆက်မဖြီးကြပါနဲ့တော့။
Stop Burmanization said... :
ဗမာ နဲ့ မြန်မာ ဆိုတာ အတူတူဘဲဆိုတာကို ဦးခင်မောင်စော ကဒီလို သမိုင်းအထောက်အထားတွေနဲ့ရှင်းပြထားတယ်ဗျ။
ဗမာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်ပြင်လို့မရတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြောတာ သမိုင်းကအရာတွေကို သမိုင်းမှာထားးခဲ့။လက်ရှိဖြစ်ပေါ် ကျင့်သုံးနေတဲ့အတိုင်းပဲ ကျင့်သုံးနေကြပါလို့။လက်ခံတာ မခံတာ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အပိုင်း။
ဗမာဆိုတာ ရှေးဘိုးဘွားအစဉ်ဆက် ကျောက်စာတွေကတည်းက ပါပြီးသား။ဒီတော့ ဗမာလူမျိုးစုဆိုတာ ရှင်းနေတာပဲ။ယခင်က တိုင်းရင်းသားအားလုံးက သီးခြားစီနေနေတဲ့အချိန်။ဒီတော့ ဗမာဘုရင်တွေက သူတို့တိုင်းပြည်ကို ဗမာလူမျိုါ် ဗမာတိုင်းပြည်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့။
မြန်မာဆိုတာ ရှေးတုန်းက ဘုရင်ခေတ်ကတည်းက မရှိတာ။ဒါကြောင့် မြန်မာနဲ့ ဗမာ အတူတူဆိုတာ မှားတယ်။မြန်မာဆိုတာ နိုင်ငံကိုခေါ်တယ်ဆိုတာ မှန်တယ်။လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။
မြန်မာနဲ့ ဗမာ မတူဘူးဆိုတာအထောက်အထားနဲ့ အယင်ရှင်းပြကြည့်ပါလား။ မျက်စိမှိတ်ပြီးမငြင်းနဲ့။ နိူင်ငံတနှစ်ငံရဲ့နာမည်ကိုပြောင်းလို့မရတောဘူးဆိုတာ ပဒေသရာဇ်စနစ်နဲ့ ဆက်အုပ်ချုပ်တောမှာကိုဆိုလိုတာလား။ ဒီလိုဆိုရင်စိတ်သာချ မင်းတို့နိူင်ငံဘယ်တောမှ ငြိမ်းချမ်းတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူး။ နိူင်ငံတနိူင်ငံရဲ့နာမည်ဟာ အဲဒီနိူင်ငံမှာ ရှိတဲ့နိူင်ငံသားတိုင် ကျေကျေနပ်နပ်လက်ခံဖို့လိုတယ်။ ဒါမှတိုးတက်မှာ။ ဗမာ(မြန်မာ)ဆိုတာ ပြည်နယ်တခုကိုဘဲ ကိုယ်စားပြုရမှာ၊ ပြည်ထောင်စုကိုကိုယ်စားပြုလို့မရဘူး။ ပြောင်းကိုပြောင်းရမယ်။ မပြောင်းရင်စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုမဟုတ်ဘူး။ ပြည်ထောင်စု မစစ်မှန်ရင်ခွဲထွက်ကြမယ်။ မခွဲထွက်ရင်တောင်ငြိမ်ချမ်းတဲ့တိုင်းပြည်ဘယ်တောမှမဖြစ်နိူင်ဘူး။
ဗမာ ဆိုတာလူမျိုးအားလုံးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး လုံးဝထောက်မခံဘူး .. ဗမာဆိုတာ ဗမာလူမျိုး တခုတည်းကိုသာ ဆိုလို၏ ... မြန်မာဆို တာ လူမျိုးအားလုံး ကိုဆိုလို၏ ရှေ့ခောတ်က လူကြိးမပြောနဲ့ ဘုရင် ပြောခဲ့တဲ့စကားဆိုရင်လည်းလက်မခံဘူး လာမပြောနဲ့ ဘယ်သူပဲ လာပြောပြော လက်မခံဘူး ( ပြောတဲ့သူတိုင်းလည်း ဗမာ လူမျိုးပဲဖြစ်မှာပါ ) ဒါ့ကြောင့်
myochitthway said... :
မြန်မာ လည်းတိုင်းရင်းသားအားလုံးပါဝင်တဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ကိုယ်စားမပြုနိုင်ဘူး။ ဗမာ ဆိုပိုဆိုးသေးတယ် ပုဂံသားတွေကိုပဲ ကိုယ်စားပြုနိုင်တယ်။ ကလျာဏီပါဠိကျောက်စာမှာ ပုဂံကို ပုဂါမ လို့ခေါ်တယ်။ ပုဂါမ ကနေ ပေါ်တူဂီသား ပင်တိုက 15 ရာစုမှာ ခေါ်လိုက်တော့ ဗမာ ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဥရောပသားတွေအတွက် မြန်မာဟာ ဗမာဖြစ်သွားတယ်။ မြန်မာကမှ ထားဝယ်တို့၊ မြိတ်တို့ ယောတို့ ပါဦးမယ်။ တကယ်တော့အိန္ဒိယသားတွေက မြန်မာပြည်မှာရှိခဲ့တဲ့ လူတွေကို ဗြဟ္မာလို့ မခေါ်ခဲ့ပါ။ ရာဇ၀င်ကြီးတို့ မှန်နန်းတို့ အရလည်း မြန်မာပြည်မှာ မင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေဟာ ခတ္တိယတွေပါ။ ဗြဟ္မဏ မဟုတ်ပါ။ ဇာတ်စနစ်ကြီးမားလှတဲ့ အိန္ဒိယန်းတွေဟာ တခြားတိုင်းပြည်တပြည်က လူတွေကို ဗြဟ္မာ လို့ သမုတ်ဖို့ အတော်ခဲယင်းလှပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော့်အနေနဲ့(စစ်အစိုးရကို ထောက်ခံခြင်းမဟုတ်ဘဲ)ဗမာထက် မြန်မာကိုပဲ ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာရော ဗမာရော အားလုံးမပါဝင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ ဘယ်နာမည်ကများအားလုံးပါဝင်နိုင်မလဲ လို့ မေးစရာရှိလာပါတယ်။ အင်ဒိုချိုင်းနား သို့မဟုတ် အရှေ့တောင်အာရှကသာ အားလုံးပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဒီအမည်ကိုတော့ ပေးလို့မဖြစ်ပေဘူးပေါ့။ အရှေ့အာရှမှာရှိတဲ့ ထိုင်းဆိုတာ မွန်တို့ ရှမ်းတို့နဲ့ ဆွေမျိုးမကင်းကြပါဘူး။ ဂျာဗားလူမျိုးတို့ မာလယလူမျိုးတို့လည်း မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ တူတဲ့ မျိုးနွယ်စုဝင်တွေပါပဲ။ စင်ကာပူတို့ဘာတို့တော့ မပြောနဲ့ မနေ့တစ်နေ့ကမှ နိုင်ငံရယ်လို့ဖြစ်လာပြီး စာပေနဲ့ လူမျိုးအစဉ်အလာကိုမရှိတာ။ ဗီယက်နမ်တို့ ဖီလပင်တို့လည်း အမျိုးမတူတောင် အရမ်းကြီးမဝေးကြပါဘူး။ ကဲ... ဒီလောက်ဆို မြန်မာ ဗမာ ဘယ်ဟာပိုဖြစ်သင့်သလဲ သဘောပေါက်လောက်ရောပေါ့။
ဘာမှ ရှင်းမနေနဲ့ ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ကယား၊ ရှမ်း၊ ရခိုင်၊ မွန် အားလုံးဟာ လူမျိုးတွေ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ဘူး။ these are not tribes, these are also nations. မြန်မာ နဲ့ ဗမာ အတူတူပဲ။ ကျန်တဲ့ လူမျိုးတွေက သူတို့ဟာ သူတို့ ရပ်တည်နိုင်တယ်။ မြန်မာ၊ ဗမာ ပေါ်မှာ မှီခိုနေတာ မဟုတ်ဘူး။
မှတ်ချက်၊ ကျွန်တော် ရွှေဘိုသား ဗမာစစ်စစ်ပါ၊ ဒါပေမဲ့ အခြား ယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြတဲ့ လူမျိုးတွေကို လေးစားတယ်။ သူတို့ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ အပြည့်အ၀ရစေ ချင်တယ်။
Myanmar ကို မသိရင် Burma လို့ပြောရင် သိပါတယ်ဗျာ။နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ နာမည်ကို မသိတဲ့သူတွေဟာ အခြေခံပညာ မသင်ခဲ့တဲ့ ပညာမတတ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံး ပညာမသင်ခဲ့တောင်မှ ကမ္ဘာ့မြေပုံကိုကြည့်ရင် ဘယ်မှာ ဘယ်နိုင်ငံရှိတယ်ဆိုတာ လူတူုိူင်းသိနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Aung San Su Kyi Country လို့ပြောမှ သိတယ်ဆိုတာကတော့ ဖောရှောလုပ်တာ ဖားတာ လွန်သွားပါတယ်ဗျာ။အောင်ဆန်းစုကြည် ကို မသိတဲ့သူတွေအများကြီး။သိကိုမသိတာ။
အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းမသိဘူး အောင်ဆန်းလည်းမသိဘူး။သူတို့သိတာ ဗမာ အခုဆို မြန်မာဆိုပြီး အားလုံးသိနေကြပြီ။ဗမာလို့သိတဲ့သူတွေကလည်း အသက်ကြီးပိုင်းတွေပါ။ယနေ့လူငယ်တွေကတော့ မြန်မာလို့ပြောရုံနဲ့သိပါတယ်။
တိုင်းပြည်နာမည်တစ်ခုကို တိုင်းတစ်ပါးသားတွေ သိခြင်းမသိခြင်းဟာ အစိုးရနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။အဲဒီ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဗဟုသုတလေ့လာမှု အားနည်းလို့ အသုံးမကျမှုကြောင့်ဖြစ်နေတာပါ။ကျုပ်တို့တောင်မှ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မရောက်ဖူးပေမယ့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေအားလုံးနီးပါးကို ကြားဖူး သိကြပါတယ်ဗျာ။
နောက်ဆုံးဘာတွေပဲပြောပြော ဒီအစိုးရကိုအတင်းပြောချင်တဲ့ အတင်းဘူတာကြီးကိုပဲ ပြန်ဆိုက်နေတာကတော့ မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။
မြန်မာ ဗမာ လူမျိုးကိစ္စ အသာထားပြီး United States of America ကို အမေရိကန်နိုင်ငံခေါ်နေတဲ့ မီဒီယာသမားတွေကို လူမျိုးအမည်နဲ့တိုင်းပြည်အမည် မသဲကွဲတာ တို့ဗမာလို့သာပြောချင်ပါတော့တယ်။ American အမေရိကန်ဆိုတာ လူမျိုးကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုးအမည်တွေကို -ese နဲ့အဆုံးသတ်တာက ကျွန်ဖြစ်ဖူးတဲ့နိုင်ငံတွေသာဖြစ်ပါတယ်။
still lucky we are arguing between "Myanmar"or "Burma". In 50 years time you may be arguing between "Myanmar"
"Burma" or "Chinese" who knows :P
In Netherland, They use to call Myanmareses!!
(Myanmar or Bamar) That dosen't matter, problem are most of immigration looking with suspected eye who are holding the red passport, who make this? we should solve this problem first. Then why we must forget past? We must change when we get chance..This is my view.
ကျတော်ကရင်ပါ။ ဘာသာရေး ဒါမှမဟုတ် သမိုင်းတွေအကြောင်း ပြောရင် ပြသနာတက် ရန်ဖြစ်ဖို့ကများပါတယ်။ ခေါ်ချင်ရာခေါ် သမိုင်းတွေကြောင့် တိုင်းပြည်အနာဂါတ်ကို မထိခိုက်ရင် ပြီးတာပဲ။
မောင်သတိ said... :
Myanmar နဲ့ Burma အငြင်းပွားနေတဲ့ အကြောင်းအရာအတွက် ဒီဆောင်းပါးဟာ ကိုးကားစရာ မဟုတ်ပါဘူး.. ခုဟာက အင်္ဂလိပ်လို Myanmar ခေါ်မလား Burma ခေါ်မလား ငြင်းနေတာပါ.. မြန်မာလိုကတော့ ပြည်ထောင်စုကြီးဟာ မြန်မာ.. လူမျိုးစုလေးဟာ ဗမာဆိုတာကို အငြင်းပွားချက်မရှိ အားလုံးလက်ခံထားတယ်ဆိုတာ အစိုးရ.. အတိုက်အခံပါတီတွေ.. အန်အယ်ဒီလို အဖွဲ့အစည်းတွေ.. လူမှုရေးအဖွဲ့တွေ ကရေးတဲ့.. ကြေငြာချက်တွေ ဆောင်းပါးတွေ.. အိုဗျာ.. ရှိရှိသမျှ အားလုံးအားလုံးမှာ မြန်မာနိုင်ငံလို့ပဲ သုံးတာကို တွေ့ရမှာပါပဲ.. ဒီတော့ Myanmar Burma အငြင်းပွားချက်မှာတော့ ကော်မန့်အရမ်းရှည်မှာ စိုးရိမ်တဲ့အတွက် ကြော်ငြာဝင်တာ မဟုတ်ပေမဲ့ ကျွန်တော်တော့ http://maungthadi.blogspot.com/2011/01/blog-post.html အတိုင်း ယူဆတာပါပဲဗျား..
ဗမာနှင့်မြန်မာကို အငြင်းပွားကာ ထုတ်ဖော်ရေးသားနေခြင်းထက် တတိုင်းတပြည်လုံးရှိ ပြည်သူများအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့် စီးဆောင်ရွက်မှုမျိုးကိုသာ ၀ိုင်းဝန်းစဉ်စားဖြေရှင်းမှု့ မျိုးကိုသာ ပိုမိုအားစိုက်ပြုလုပ်ကြပါလို့ ......
korea said... :
ဘယ်လိုခေါ်ခေါ် ဖြစ်စေချင်တာက တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုလား မပြုလားက အဓိက မဟုတ်လား။ စစ်အစိုးရက တိုင်းပြည်နံမည်ကို ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ကိုယ်စားပြုသွားတာမှ မဟုတ်ပဲ၊ အမြဲနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်နေတာ။ မြန်မာခေါ်ခေါ် ဗမာခေါ်ခေါ် တဦးကို တဦး လေးစား တန်ဘိုးထားတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ လူဆိုတာ တမျိုးတည်းဆိုတဲ့ အသိရှိဖို့က အဓိကပါ။
I agreed with above someone comment that most of the foreigner knew well Aung San Su Kyi as Novel peace laureate.
Really many foreigner doesn't know Myanmar. Burma is more well known and If you say Aung San SU Kyi's country then they are easy to know.
First I don't believe and now I believe..
Common Comment Collection said... :
ဗမာဆိုတာ ရှေးဘိုးဘွားအစဉ်ဆက် ကျောက်စာတွေကတည်းက ပါပြီးသား။ဒီတော့ ဗမာလူမျိုးစုဆိုတာ ရှင်းနေတာပဲ။ယခင်က တိုင်းရင်းသားအားလုံးက သီးခြားစီနေနေတဲ့အချိန်။ဒီတော့ ဗမာဘုရင်တွေက သူတို့တိုင်းပြည်ကို ဗမာလူမျိုးဗမာတိုင်းပြည်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့။ ဗမာ ဆိုတာလူမျိုးအားလုံးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး ... ဗမာဆိုတာ ဗမာလူမျိုး တခုတည်းကိုသာ ဆိုလို၏ ... မြန်မာဆို တာ လူမျိုးအားလုံး ကိုဆိုလို၏
မြန်မာနဲ့ ဗမာ အတူတူဆိုတာ မှားတယ်။
မြန်မာဆိုတာ နိုင်ငံကိုခေါ်တယ်ဆိုတာ မှန်တယ်။
ဗမာဆိုတာ လူမျိုးခေါ်တယ်ဆိုတာ မှန်တယ်။
နံမည်နှစ်မျိုးစလုံး ကျနော်တို့ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေကို ကိုယ်စားမပြုပါဘူး လို့ပြောခဲ့တဲ့လူတွေ နားထောင်ရတဲ့သူကို မဖြီးကြပါနဲ့တော့။
မြန်မာ လည်း တိုင်းရင်းသားအားလုံးပါဝင်တဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ကိုယ်စားမပြုနိုင်ဘူး လို့ပြောခဲ့တဲ့လူတွေ နားထောင်ရတဲ့သူကို မဖြီးကြပါနဲ့တော့။
ဗမာ ဆိုပိုဆိုးသေးတယ် ပုဂံသားတွေကိုပဲ ကိုယ်စားပြုနိုင်တယ် လို့ပြောခဲ့တဲ့လူတွေ နားထောင်ရတဲ့သူကို မဖြီးကြပါနဲ့တော့။
ဒီလောက်ဆို မြန်မာ ဗမာ ဘယ်ဟာပိုဖြစ်သင့်သလဲ သဘောပေါက်လောက်ရောပေါ့။
ဘာမှ ရှင်းမနေနဲ့ ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ကယား၊ ရှမ်း၊ ရခိုင်၊ မွန် တိုင်းရင်းသား အားလုံးဟာ လူမျိုးတွေ မြန်မာဆို တာ လူမျိုးအားလုံး ကိုဆိုလို၏ ။
Myanmar ကို မသိရင် Burma လို့ပြောရင် သိပါတယ်ဗျာ။နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ နာမည်ကို မသိတဲ့သူတွေဟာ အခြေခံပညာ မသင်ခဲ့တဲ့ ပညာမတတ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သူတို့သိတာ ဗမာ အခုဆို မြန်မာဆိုပြီး အားလုံးသိနေကြပြီ။ဗမာလို့သိတဲ့သူတွေကလည်း အသက်ကြီးပိုင်းတွေပါ။ယနေ့လူငယ်တွေကတော့ မြန်မာလို့ပြောရုံနဲ့သိပါတယ်။
တိုင်းပြည်နာမည်တစ်ခုကို တိုင်းတစ်ပါးသားတွေ သိခြင်းမသိခြင်းဟာ အစိုးရနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။အဲဒီ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဗဟုသုတလေ့လာမှု အားနည်းလို့ အသုံးမကျမှုကြောင့်ဖြစ်နေတာပါ။ ကျုပ်တို့တောင်မှ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မရောက်ဖူးပေမယ့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေအားလုံးနီးပါးကို ကြားဖူး သိကြပါတယ်ဗျာ။
နောက်ဆုံးဘာတွေပဲပြောပြော မြန်မာဆိုတာ နိုင်ငံကိုခေါ်တယ်ဆိုတာ မှန်တယ်။ ဗမာ လူမျိုးခေါ်တယ်ဆိုတာ မှန်တယ်။
ဘယ်လိုခေါ်ခေါ် ဖြစ်စေချင်တာက တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးကို မြန်မာခေါ်ခေါ် ဗမာခေါ်ခေါ် တဦးကို တဦး လေးစား တန်ဘိုးထားတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ လူဆိုတာ တမျိုးတည်းဆိုတဲ့ အသိရှိဖို့က အဓိကပါ။
Burma နိုင်ငံ Burmese လူမျိုး
Myanmar နိုင်ငံ Myanmese လူမျိုး
as Burma is notaproper name like, mg ba, it isacommon name that belongs to 60 million people. the bastards cannot change without people's consent. the suckers think that the whole country is theirs. so they did change it shamelessly.
လို့ပြောရတယ် တနှစ်ခွဲကျော်လောက် စာတွေကို ကျွန်တော့မိဘတွေနေတဲ့ မြို့နယ်စာတိုက်ကသွားမပေးဘူး
စာတိုက်ကို သွားမေးခိုင်းတော့ Rangoon-Burmaလို့
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက Burma ကနေ Myanmar ကို
နိုင်ငံတော် အလံကိစ္စလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ၊
နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ အကြံပေးအရာရှိကလဲ မက်ကိန်းလာတုန်းက
Myanmar လို့သုံးနှုန်းသွားတာကို အတော်သဘောကြနေပုံရတယ်
"တယ်ဟုတ်ပါလား ငါတို့ မဟုတ်တယုတ်နဲ့ အများဆန္ဒမပါပဲ
ရင်၊ ပထမခြေလှမ်းအဖြစ် တိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးတဲ့နာမည်
များကှိ ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်သောသဘောထားကို(မည်သည့်နှောင်ကြိုးမှမပါဘဲ) ကောက်ယူမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီး တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်(ဘယ်တော့မှလုပ်မှာ
မြန်မာဆိုတာ လူမျိုးစုလို့ပြောတဲ့သူတွေဟာ ဘယ်အထောက်ထားနဲ့ပြောတာလဲ?မြန်မာဆိုတာ ဗမာနဲ့အတူတူဆိုတာ ဘယ်သူပြောတာလဲ?ရှေးဘုရင် ဘိုးဘွားခေတ်တွေမှာ မြန်မာ ဆိုတဲ့စကားလုံးကို သုံးလား?No, ဗမာဆိုတဲ့စကားလုံးပဲ ကျောက်စာတွေမှာ ထွင်းထုခဲ့တာ သုံးစွဲခဲ့တာ။ဗမာ ဘုရင်တွေပဲရှိတာ။မြန်မာ ဘုရင်ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူး။ကချင် ကယား ကရင် ချင်း မွန် "ဗမာ" ရခိုင် ရှမ်း ဆိုတာပဲရှိတယ်။ကချင် ကယား ကရင် မွန် "မြန်မာ" ရခိုင် ရှမ်းဆိုပြီး မရှိဘူး။ဒါကြောင့် ဗမာနဲ့ မြန်မာ အတူတူဆိုတာ လုံးဝ(လုံးဝ)မဟုတ်ဘူး။
ဗမာလူမျိုးစုက အများစုဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့လူမျိုးစုတွေအားလုံးနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး ဦးစီးအုပ်ချုပ်နေခဲ့တယ်။ရှေးဘိုးဘွားတွေကနေ လွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်ထိ နိုင်ငံကိုလည်း ဗမာနိုင်ငံလိုပဲသုံးနှုန်းခဲ့တာပါ။ ဒီလိုဆို မြန်မာက ဘယ်ကရောက်လာသလဲ ဘာကြောင့်သုံးနှုံးလိုက်ရသလဲ။
တပ်မတော်အစိုးရလက်ထပ်မှာ တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ဖို့ မြန်မာဆိုတဲ့စကာလုံးကို သုံးနှုံးဖို့လုပ်လာတယ်။ဗမာဆိုတာ ဗမာလူမျိုးစုကိုပဲ ကိုယ်စားပြုပြီးပြောထားတဲ့ဖြစ်တဲ့ ဗမာနိုင်ငံလို့ပြောခြင်းဟာ ဗမာလူမျိုးတွေပဲ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံအဖြစ်မျိုးကို သက်ရောက်စေတယ်။ဒါကြောင့် တပ်မတော်က အဲဒီလို ဗမာလူမျိုးစု တစ်ခုတည်း
ကိုယ်စားပြုခေါ်တဲ့ နာမည်ကို မခေါ်စေချင်လို့ အားလုံးတိုင်းရင်းသားတွေ ပါဝင်တဲ့ မြန်မာဆိုတဲ့စကားလုံးကို သုံးနှုံးခဲ့တယ်။ဒါဟာ ကောင်းမွန်တဲ့အသုံးနှုံးပါ။
မြန်မာကိုပြောင်းတာမကြိုက်ဘူး ဗမာပဲသုံးတာကြိုက်တယ်ဆို သုံးနိုင်ပါတယ်။ကျုပ်တို့က ဗမာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျုပ်တို့ ဗမာနာမည်တွေကိုပဲ ခေါ်တဲ့အတွက် သိပ်ကိုကြိုက်တာပေါ့။ဒီဗမာနိုင်ငံကြီးမှာ ကျုပ်တို့ ဗမာတွေပဲ ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားလို့ပါပဲ။ဗမာပဲခေါ်ခေါ် မြန်မာပဲခေါ်ခေါ် ကျုပ်တို့ ဗမာတွေအတွက် နစ်နာစရာအကြောင်းတစ်ခုမှမရှိဘူး။တိုင်းရင်
းသားအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ မြန်မာကို ခေါ်လည်း ကြိုက်တယ်။မျှတလို့။ ဗမာလို့ခေါ်လည်း ကြိုက်တယ် ကိုယ့်လူမျိုးစုကို ခေါ်လို့။
ဒီတော့ အင်္ဂလိပ်တွေ ကိုလိုနီတွေခေါ်ခဲ့တဲ့ အသုံးနှုံးတွေကိုတော့ ကျုပ်တို့က လက်မခံပါဘူး။ဥပမာ Rangoon ဆိုတာကို မခေါ်နိုင်ဘူး Yangoon ပဲခေါ်မယ်။ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ အမည်နာမတွေဟာ ကျုပ်တို့လူမျိုးတွေကပဲ ခေါ်ယူမှည့်ရမယ် စိတ်ကြိုက်သုံးစွဲခေါ်ယူခွင့်ရှိရမယ်။ကိုလိုနီ
အမျိုးယုတ်တွေပေးထားတဲ့ အမည်တွေကို သုံးရင် ကျုပ်တို့ ဘိုးဘွားတွေအသက်သွေးချွေးတွေ ပေးဆပ်ခဲ့ရတာတွေကို မျက်ကွယ်ပြုရာကျတယ်။ဒါကြောင့် မခေါ်နိုင်ဘူး။Burma Myanmar ကတော့ ခေါ်ချင်သလိုခေါ်ပစေ အငြင်းပွားမနေတော့ဘူး။အွန်လိုင်းမှာ အငြင်းပွားနေလည်း ဒီနိုင်ငံ မြန်မာဆိုတဲ့နာမည်က ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့် နိုင်ငံခြားမှာလည်း Myanmar ပဲသုံးပါတယ်။Burma လို့မသုံးပါဘူး။မသိရင် ထိုင်း တရုတ်အနားမှာပဲပြောလိုက်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အမည်ကို မသိတဲ့သူတွေဟာ ငတုံးငအ စာမတတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းမသိဘူး ဗိုလ်အောင်ဆန်းလည်းမသိဘူး။ဒီတော့ အောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံလို့လည်း အပြောမခံနိုင်ဘူး မပြောဘူး။အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာ လူမျိုးအားလုံးကို ကိုယ်စားမပြုတဲ့အတွက် လုံးဝ မပြောဘူး။ပြောလည်းမသိတဲ့သူက မသိတာပါပဲ။ဒီတော့ ဘယ်ကလာလဲမေးရင် မြန်မာပဲ။မသိရင် စုံစမ်း ထပ်မပြောဘူး ဒါပဲ။မသိဘူးလို့ပြောရင် ကျုပ်က သူတို့ကို အထင်သေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေရဲ့အမည်တွေတောင် မသိတာ တော်တော်တုံးအတဲ့သူတွေပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့။
ဒါပေမယ့် ယနေ့ခေတ်မှာတော့ မြန်မာဆိုတာကို အားလုံးသိနေကြပါပြီ။အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံလို့ပြောမှ သိတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကတော့ ဖားလွန်းရာ ဖောရှောနိုင်လွန်းရာ ကျပါတယ်။ရှူးတူးတူးပေါတောတောဆန်လွန်းရာ ကျပါတယ်။ကျုပ်တို့နိုင်ငံကို ဘယ်လူပုဂိုလ်ရဲ့ အမည်နာမတပ်ပြီး မပြောနိုင်ဘူး။နိုင်ငံပြောလို့မှမသိရင် ရှင်းမပြမနေနဲ့ အာချောက်တယ်။အဲဒီလို စာမတတ်တဲ့သူတွေကို ရှင်းပြဖို့မလိုဘူးထင်တယ်။အာရှမှာ ဘယ်နိုင်ငံတွေရှိတယ် အရှေ့တောင်အာရှမှာ ဘယ်နိုင်ငံတွေရှိတယ်ဆိုတာ အလယ်တန်းအဆင့်ကလေးတွေတောင် သိပါတယ်။
ဘီဘီစီမှာ ဆွေးနွေးထားတဲ့ ပညာရှင် ၂ ဦးလုံးက အညာက ဗမာ ၂ ဦးပါ။ ဘာသာစကား ရှုထောင့်က ဆွေးနွေးသွားကြတာပါ။ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အယူအဆတွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆရာစဉ်သမားဆက် လက်ခံ ယုံကြည်မှုကို မျှဝေတဲ့သဘောပါ။ လူမျိုးရေး နိုင်ငံရေး စိတ်နဲ့ ပြောကြတာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပါဠိဘက် လိုက်ထားတာတော့ မြင်သာပါတယ်။ “ဗြဟ္မာ” ကနေ “မြန်မာ” ဆိုတာကို ပြောင်းတဲ့အခါ အက္ခရာတွေရဲ့ ဌာန်တူဌာန်နီး ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ သဘာဝတွေ (ဗ နဲ့ မ၊ ဟ် နဲ့ န် - လ သတ် တို့ ဟ သတ် တို့ဟာ န သတ်ကို ပြောင်းလေ့ရှိ)ကြောင့် ပြောင်းသွားတယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆပေါ့။ မြန်မာနဲ့ ဗမာ ဆိုတာလည်း ဒီသဘောပဲ အပြန်ပြန် အလှန်လှန် ခေါ်ကြတာပါ။ ပေါ်တူဂီ၊ ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ်တွေ မလာခင်ကတည်းက အခြားလူမျိုးတွေ (ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စသည်)က ဗမာပဲ ခေါ်လာခဲ့တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ထားဝယ်က လူတွေဆို ဗမာတွေကို “ဂံသား”လို့ ခေါ်သေးတာပါ့။ ဒါကြောင့် ဆွေးနွေးသူ ၂ ဦးရဲ့ အယူအဆမို့ အတိအကျလို့တော့ ပြောလို့မရပါဘူး။ သူတို့ကလည်း သူတို့ နှစ်သက်ရာကို စကား လက်ဆင့်ကမ်းတဲ့ သဘောပါ။
ထိုင်းက “ဖမာ”လို့ ပြောလို့ “ဗမာ”ဆိုတာ ဖြစ်သင့်တယ်ဆိုရင်၊ တရုတ်က “မျန်တျန့်”(အသံထွက်အတိုင်း ရေးထားခြင်း)လို့ ပြောတော့ ပုဂံကျောက်စာတွေ ရှေးဟောင်းစာတွေမှာပါတဲ့ “မြံမာ၊ မြမ္မာ”ဆိုတာတွေကကော ပိုတောင် နီးမနေဘူးလား။ ပြီးတော့ မြန်မာ/ဗမာ ဖြစ်လာမယ့်သူတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံ ဘက်က ၀င်လာတယ်ဆိုတာလည်း သမိုင်းအချက်အလက် တော်တော်များများက ခိုင်ခိုင်လုံလုံ ပြောပြနေတယ်။
တိုင်းရင်းသား၊ လူမျိုး၊ ဘာသာစကား၊ ရုံးသုံးဘာသာစကား၊ နိုင်ငံအမည်ဆိုတာက မကြိုက်ဘူး ပြောင်းချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အပြောင်းအလဲကို လက်ခံတဲ့ အစိုးရ ရှိလာခဲ့ရင် စုံစုံညီညီ ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပြီး သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေ သိခြင်း/မသိခြင်းကို သိပ် ဦးစားပေးစရာ မလိုပါဘူး။ နာမည်ဆိုတာ အများက ကိုယ့်ကို ခေါ်ဖို့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ ပညတ်ထားတာပဲလေ။ ပေးထားတဲ့နာမည်ကို မခေါ်ဘူး၊ အသိအမှတ်မပြုဘူး ဆိုလည်း အဲဒါ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒါက အများနဲ့ ဆိုင်တဲ့ နာမည်တွေ ဖြစ်လေတော့ ကိုယ့်အစုတစ်စုထဲမှာတောင် အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ အများညီဖို့တော့ လိုတာပါ့။
ကိုင်းဗျာ ဒါဆိုလဲ အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကို ဘယ်လိုခေါ်ကြမလဲဆို တာ အခုထဲ ကကြိုဆွေးနွေးကြရင်မကောင်းဘူးလား
အခုတင်တဲ့ ပို့စ်က လူမျိုးတွေအချင်းချင်းကြား သွေးကွဲအောင် သွေးဆူအောင်လုပ်ပေးတာပဲလို့ ယူဆတယ်။ နောက်တခုက မြန်မာဖြစ်ဖြစ် ဗမာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ သူတို့ဟာသူတို့သတ်မှတ် တခြားလူမျိုးတွေကိုရောထွေပြောပြီး ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးချင်တာက တခြားလူမျိုးတွေကို ၀ါးမျိုးတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ ဆင်ခြင်ကြပါ။ ၀ိဘတ်လိုက်တတ်တယ်ဗျ။
ငယ်ကတည်းက သိခဲ့တာက ဗမာဆိုတာ လူမျိုးစု။ မြန်မာဆိုတာ အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတာ။ ဒါပဲသိတယ်။ မျက်စိမှိတ်ပြီး ဗမာပြည်လို့ ပြောနေကြတာကို နားထောင်ရတာ သွေးခွဲနေသလို ခံစား၇တယ်။ မိတ်ဆက်တဲ့ အခါ မြန်မာနိုင်ငံကပါလို့ပဲ ပြောဖြစ်တယ်။ ဘယ်တော့မှ ဘားမားက လို့ မပြောဘူး။ မသိသေးရင် အရင်က ဘားမားလို့ ခေါ်တယ်။ အခု မြန်မာဖြစ်သွားပြီ။ ဒီလိုပြောလို့မှ မသိသေးရင် တရုတ်၊ ထိုင်း နဲ့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံကြားမှာ ရှိတယ်။ ကမ္ဘာ့မြေပုံကို ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ ခပ်တည်တည်ပဲ ပြောလိုက်တယ်။ ငတုံး တစ်ယောက်ကို ထပ်ရှင်းပြဖို့ အချိန်မပေးဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံပဲ ဖြစ်ရမယ်။
ဗမာနဲ့ မြန်မာဟာအတူတူဘဲ။ ဒါကြောင့် ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြုလို့မရဘူး။ လူထုဆန္ဒတောင်ခံစရာမလိုတောဘူး။ ဗမာ (မြန်မာ)သည် ပြည်နယ်တစ်ခုကိုဘဲ ကိုယ်စာပြုရမယ်။ ဒါပဲကွ....
ဘုန်းကြီးကျောင်းသား said... :
စကားတစ်လုံးကို အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ စကားလုံးရဲ့ မူရင်းအနက်(Literal Meaning) နဲ့ ဆင့်ပွားအနက် (Derivative Meaning) နှစ်မျိုးလုံးကို သတိပြုဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချိန်တုန်းက မြန်မာလို့ဘဲ ပြောပြော၊ ဗမာလို့ဘဲ ဆိုဆို မူရင်းအနက်အရ လူမျိုးတစ်မျိုးတည်း ကိုဘဲ ကိုယ်စားပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ ဒီနိုင်ငံကို မြန်မာလို့ ပြောလိုသူတွေရော ဗမာလို့ ခေါ်ချင်သူတွေပါ အားလုံးက ဆင့်ပွားအနက်အနေနဲ့ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ လူမျိုးတွေအားလုံးကို ရည်ညွှန်တယ်ဆိုတာ အငြင်းပွားဖွယ် မရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပာယတ္ထ ဖြစ်တဲ့ ပြောဆိုသူရဲ့ အာဘော်အထိသွားသင့်ပါတယ်။ စကားလုံးရဲ့ သဒ္ဒတ္ထ ဖြစ်တဲ့ အခေါ်အဝေါ် အသုံအနှုန်းအပေါ်မှာဘဲ အာရုံစိုက်ပြီး လူမျိုးရေးအရ ဥပါဒါန်ကပ်နေတာမျိုးဟာ ၂၁-ရာစုခေတ်အတွက် မလိုအပ်တော့ဘူးထင်ပါတယ်ဗျာ။
မြန်မာရော ဗမာရော ဘယ်သူမှအဖြစ်မရှိ ငကြောက်တွေ အသုံးကျတဲ့ကောင်တွေ
sk said... :
then lets call Myanbar or Bamyar hehe
For my suggestion , i want English to be our country official language. That's more suitable for all.
ကျနော်က ဒီမြန်မာ၊ ဗမာ ကိစ္စကို၊ ကျမ်းကိုးလေး
တွေ့ ထားလို့ ၊ တင်ပြချင်နေတာ အတော်ပဲ။
၁၈၈၃ ခုနှစ်မှာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့၊
ဆာ အာသာဖယ်ယာရဲ့ 'History of Burma' စာအုပ်ထဲက၊ မြန်မာ လို့အထင်ကရသုံးသွားတဲ့ စာပိုဒ်လေးတွေကို၊ ထုတ်နှုတ်ပေးပါ့မယ်။ အကြမ်းအားဖြင့် ၁၉ဂ၉ ခုကနေ ပြန်ရေတွက်ရင်၊ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ကွာပါတယ်။
'--- the Indian settlers gave to them, and adopted themselves, the name of Brahma, which is thus used in Buddhist sacred books for the first inhabitants of the world. This term, when used to designate the existing people, is now written Myanmar, and generally pronounced Bama.' အိန္ဒိယကနေပြီး အခြေ
ချဖို့ လာရောက်သူတွေက ဗြဟ္မာလို့ ခေါ်ခဲ့ပြီး၊ မြန်မာ
လို့ရေးပါတယ်။ အသံထွက်ခေါ်တော့ ဗမာ တဲ့။ ဆိုတော့ ဒီစာပိုဒ်အရ၊ မြန်မာဆိုတာ ဗမာ
နဲ့ အတူတူပဲလို့မှတ်ရမှာပါ။ ဒါက အစပဲ ရှိပါသေးတယ်။ နောက် အပိုဒ်မှာက၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတော့၊ ဗြဟ္မာကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ မြန်မာလို့အခေါ်ခံရတာကို၊ ပိုမိုနှစ်သက်လာကြပြီး၊ ပြည်သူအားလုံးဟာ မြန်မာ ပဲဆိုတာ '---has made the whole people now bearing the name of Myanmar---' နဲ့ဖေါ်ပြပါတယ်။ ဂင်္ဂါမြစ်ဝှမ်းကနေ ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းကို အခြေချလာသူတွေဖြစ်တဲ့၊ အာရိယန်လူမျိုးနွယ်စုအဖြစ်၊ ယုံကြည်ခဲ့ကြလို့ ပါတဲ့။ သရေခေတ္တရာပြည်မှာ ပျူ၊ ကမ်းယံ
်နဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေ နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့'--- the tribes then existing under the monarchy were the Pyu, Kanran, and Myanmar.' နဲ့ ဖေါ်ပြပါတယ်။
နောက်ဆုံးအပိုဒ်ကြတော့၊ '---the separate tribes are seldom mentioned, except in ancient ballads, and the name Myanmar appears as the national designation for all.' လို့ဖေါ်ပြတယ်။ ရှေးအကသီချင်းတွေထဲမှာ ပါတာကလွဲရင်၊ သီးခြားလူမျိုးနွယ်စုအလိုက် ပြောဆိုကြတာမရှိတော့ပဲ၊ တိုင်းရင်သားအားလုံးကို မြန်မာ (ရေး)၊ ဗမာ (ဖတ်) ဖြစ်သွားတယ်လို့ပါပါတယ်။ ဒီတော့ အားလုံးကို ခြုံပြီး ကောက်ချက်ချရင်၊ ဗမာလို့ ခေါ်ရင် မြန်မာပြည်ထဲမှာ ရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုပြီး၊ ဗမာ ဆိုတဲ့ သီးသန့် လူမျိုးတမျိုး လုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။ မြန်မာပြည်လို့ ရေးရင်၊ ဗမာပြည်လို့အသံထွက်ရမှာပါ။ ဒါက မြန်မာပြည်သူတွေ အတွက်ပါ။ (ဗမာပြည်သူတွေ အတွက်ပါလို့မျက်စိမှိတ်ပြီး၊ နားထဲကြားယောင်ကြည့်ကြပါ)။ နိုင်ငံတကာအတွက်တော့ နည်းနည်းစဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ မြန်မာ Myanmar လို့ ရေးရင် မြန်မာလို့ ပဲ အသံထွက်ခိုင်းရမှာပါ။ ကိုယ်တွေလို ဗမာလို့ ထွက်ပါ
လို့ ၊ သွားပြောလို့မရပါဘူး။ ဒီစာအုပ်ကိုပဲ ကျမ်းကိုးမပြုစေချင်ပါဘူး။ ဗမာလူမျိုးဆိုတာ မရှိတော့ဘူးပြောလို့စိတ်လည်း မဆိုးကြပါနဲ့ ။ စာအုပ်ပါအတိုင်း တင်ပြပြီး ကောက်ချက်ဆွဲတာပါ။
ကျနော် နည်းနည်းဖြည့်စွက်တင်ပြဖို့ရှိပါတယ်။ ဆာ အာသာဖယ်ယာရဲ့ စာအုပ်ထဲမှာတော့ Mramma (a အပေါ်မှာ ခေါင်မိုးလေး အုပ်ထားတယ်) လို့ရေးပါတယ်။ ဖေါင့် အခက်အခဲကြောင့်ပါ။ မြမ္မာ (သို့ ) မရမ်မာလို့ထွက်မှာပါ။ အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာပဲ မွန်လူမျိုးဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို၊ လုံးဝမတွေ့ ရပဲ Talaing လို့ ပဲ တောက်လျှောက် သုံးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာတော့ သုဝဏ္ဏူမိ သထုံပြည်ကို အိန္ဒိယပြည် Telingana အမျိုးအနွယ်တွေက၊
တည်ထောင်ခဲ့တာလို့ဆိုလေတော့၊ Talaing လို့ ပဲ၊ သူ့ နိုင်ငံသားတွေကို ခေါ်ဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာဖတ် ၀ါသနာအိုးများအတွက်၊ ဒီစာအုပ်ကို
၀ယ်ယူနိုင်မယ့် လ်ိပ်စာနဲ့ISBN ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
5 Sukhumvit 61, Bangkok, Thailand.